Posted by JuneOne at 4:46 PM
Anonymous October 14, 2013 at 6:12 PM
maynyeinchan October 14, 2013 at 6:34 PM
JuneOne October 14, 2013 at 9:45 PM
Sonata Cantata October 14, 2013 at 6:49 PM
JuneOne October 14, 2013 at 9:44 PM
Anonymous October 14, 2013 at 8:04 PM
ကလေးတွေက အရမ်းတတ်ပြီး အရမ်းချစ်ဖို. ကောင်းလိုက်တာ
JuneOne October 14, 2013 at 9:46 PM
ကျေးဇူးပါ။သူက အငယ်လဲဖြစ်တော့ သွက်တယ်။
တန်ခူး October 16, 2013 at 9:28 PM
ခစ်ျစရာကောင်းလိုက်တာနော်. သူတို့ လေးတွေနဲ့ စကားတွေပြောချင်လိုက်တာ
:P November 17, 2013 at 11:44 PM
မေကလေးနဲ့ အက်ဒဝင်အကြောင်း မဖတ်ရတာကြာပြီ ။
မေက သိလိုက်သားနဲ့ ရမလား အကဲစမ်းကြည့်တာပေါ့လေ.... ချစ်စရာလေး... ။
မေနဲ. ဂျွန်အကြောင်း မဖတ်ရတာတောင်ကြာသွားပြီး))
သူတို.အကြောင်းလေးတွေရေးပါအုန်း။ သိပ်ချစ်ဖို.ကောင်းတဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်။
NC Diary December 13, 2013 at 11:14 PM